Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Imbiza yokuGcwalisa iiMpompo zeKhitshi / WOWOW Pot Filler Faucet ngaphezulu kwesitovu kwiNickel eBrashi
I-WOWOW Pot Filler Faucet ngaphezulu kwe-Stove kwi-Nickel eyi-Bronze
ikaliwe 5.00 Kwi-5 esekelwe kuyo 25 amanqaku umthengi
(25 ncomo ngumthengi)
Isakhono sokucoca esilula sezinto zayo senza ukuba itephu yefriji yasekhitshini ilungele ukusetyenziswa kwezempilo.
Yenziwe ngezinto ezingenasinyithi, itafile ekhitshini ekhitshini iyakwazi ukumelana nomhlwa.
Isixhobo sokudibanisa kabini esihlanganisiweyo sibotshwe kakuhle, ngenxa yoko akukho lula ukuqhekeza okanye ukubumbeka.
Imveliso kulula ukuyisebenzisa ngaphandle komzamo omkhulu wokubamba.
2311100 imiyalelo yokufaka
Yongeza ukubukeka kweklitshi yakho ekhitshini kunye neWall-Mount Pot Filler eyi-2311100 ebandakanya i-silhouette ebukekayo.
Ilungile ekhitshini enkulu yokuphelisa le mbiza kumpheki wakho ukuze ugcwalise iimbiza zakho zokupheka ngaphandle kokuzikhupha kwisinki kwisitovu.
Izinto zeHardware: Zogqunywe phantsi kwesiqinisekiso soTyikityo seHardware sobomi.
Ukuvaleka kabini kuvumela ukuba umthengi acime amanzi nakudonga okanye kwindawo yokuphuma, ke ukulawula umlambo wamanzi kwinqanaba lokusetyenziswa.
Umzimba we-faucet ohlanganiswe ngobhedu umelana kakhulu nokugqwala kunye nenketho ephezulu kakhulu yokumelana nobushushu obuphezulu.
Iseti enye ebekwe kudonga olunye kunye nokudibanisa Amadawo amabini okujija avumela isixhobo sombumbi ukuba sisonge kude xa singasetyenziswanga.
Ukucaciswa: Ukuphakama: 9-1 / 2 ″ (ezantsi ukuya phezulu kakhulu kumbhobho).
Ukuphakama kwespout: 2-3 / 4 ″ (embindini wesokethi yodonga kwindawo yokuphuma).
Isantya sokuhamba: iilitha ezi-1.8 ngomzuzu omnye.
I-SKU: 2311100 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Imbiza yokuGcwalisa iiMpompo zeKhitshi tags: Uqhekeze uNickel, Imbiza yePot, Uluhlu lweNdonga
Pot lokugcwalisa Faucet Ukusonga Handle Kabini Nickel
Ndizibonile ezinye phaya zifuna imali eninzi kakhulu. Eli ibilixabiso elikhulu, bendilifakile ngobuchwephesha kodwa u-plumber wavuma ukuba lixabiso eliphezulu kwaye likumgangatho olungileyo.
Ezi zinto sizithengele ibhafu, njengoko sinemibhobho eyahlukeneyo engena eludongeni endaweni yomgangatho oqhelekileyo wokuxuba.
Yonke into yenziwe kakuhle. Isebenza ngokumangalisayo. Ulwakhiwo olunzima. Uyilo oluqinileyo nolungileyo. Ngamana zihlala ngonaphakade!
Ukujonga okucocekileyo kwaye inkqubo yevalvevu yenza kakuhle ukunqanda ukuvuza emva kokuba ivaliwe. Ingxaki kule nto yokugcwalisa imbiza kukuba iingalo azizikwere kwizithuba ke oko kujongeka ngathi zihamba kancinci. UKUHLAZIYA: Inkampani ibone uphononongo lwam kwaye yafikelela kwaye yathi ndifumene imveliso enesiphene kwaye yandithumela entsha akukho mibuzo ibuziweyo. Babenyanisile, entsha ibonakala intle. Inkonzo enkulu kubathengi
Kuyamangalisa andikwazi ukuthetha ngokwaneleyo malunga nale nto yokugcwalisa imbiza. Wonke umntu otyelele ikhaya lam uyalithanda. Inkonzo yabathengi yayintle andinakucela iinkonzo ezingcono zokwenza kwakhona.
Yithande uyilo. Uziva womelele. Ndiza kuthenga enye eDelta ekhaya eDepot ngolu hlobo kodwa ndibiza phantse i-400 yeedola, ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndenze le nto emva kokufunda uphononongo. Ndonwabile ukuba ndiyifumene, kodwa ndiza kuthumela imifanekiso kamva emva kokuba kufakwe iWOWOW. Imbonakalo yanamhlanje kwaye uyayithanda indlela evakalelwa ngayo.
Ndonelisekile yile nto yokugcwalisa imbiza. Uplamba wam uyifakile kwaye isebenza kakuhle. Ndiyayithanda indlela ebukeka ngayo kwaye ixabiso lalifanelekile. Umthengisi ebehlala kakhulu kwaye ephendula imibuzo yam ngokubhekisele kwimveliso.
Ndiyayithanda le nto yokugcwalisa imbiza. Andizange ndicinge ukuba kuya kuba lula kangakanani. Amanzi ahamba kakuhle kwaye awaze atshize. Ndinembiza yam yekofu ecaleni kwesitovu sam kwaye nengalo ifikelela ngokugqibeleleyo ekugcwaliseni idama.
Bekufuneka ndithenge umngxuma kwidesika yam kwaye ndenze enye into phantsi kokulungiswa kwekhawuntari ukuze ndingene. Kanye ngoku igqibelele! Izibambo azibekwanga ngokufanelekileyo. Umntu kufuneka acinge malunga nezikhundla zokucima / zokucima izibambo ezibini ukuze zilunge kwaye zivaliwe. Ngaphandle koko bubuhle bemali.
Le mbiza yokugcwalisa yayingabizi, kwaye ijongeka intle kwaye isebenza kakuhle. Kukugqitywa okumnyama okumnyama. Yolula yonke indlela eya kwisitovu sangaphambili. Ihamba ngokulula kwaye kwakulula ukuyifaka. Inomjelo wokuhamba kwamanzi olungileyo.
Ixabiso elikhulu, lisebenza njengoko kulindelwe. Ukugqiba kubonakala kumgangatho olungileyo, onesidima. Ngokuqinisekileyo kukhokelela simahla. Ndinqwenela ukuba ize nezibambo ezibini njengoko uninzi lusenza kodwa kuko konke endikucebisayo.
Olu longezo olukhulu ekhitshini lethu. Ikontraka elenza umsebenzi liwuthande kangangokuba liza kuzifakela. Zonke zilungile! Wonke umntu wayecinga ukuba kupholile.
Wachukumiseka kakhulu ngumgangatho kunye nokufakwa ngokulula. Ilungele ikhitshi lam lezorhwebo. Ingasetyenziswa naphi na. Ngokuqinisekileyo ndincoma.
Simane silungisa ikhitshi lethu kwaye songeza oku kugcwalisa imbiza. Yakhiwe kakuhle kwaye yenyuka ngokulula!
Yithande le faucet. Isebenza kakuhle! Isibambi sokucima / sokucima esiphindwe kabini sisebenzele kakhulu ukungafikeleli kwisitovu esishushu ukuvula.
Sisebenzise le faucet kwigumbi lokuhlambela. Ukufakwa kwakulula kwaye kujongeka kukuhle!
Le faucet intle kakhulu kwaye awukwazi ukubetha ixabiso! Bendinexhala lokuba izakuba mbumbulu kodwa yenziwe kakuhle.
Ngosuku olulandelayo emva kokufumana imveliso, ndiye ndaqala ukufakela itephu yam yombiza. Isixa seteyipu yomtya we-PTFE sanele. Emva kwexesha lokuqala ndoyisakele ukufaka ngenxa yetape eninzi, iteyiphu eseleyo ye-PTFE yayisakwanele ukufakelwa kwam okwesibini. Emva kokugqitywa kofakelo, ndenze iimvavanyo ezininzi, kwaye akukho kuvuza kwamanzi kwenzeka!
Ukuhanjiswa kwakukhawulezile, kwaye ndayifumana imveliso ngosuku lwesithathu emva kokuthenga. Ikhitshi lam elisandula kulungiswa ngokukhawuleza lifuna ukufaka itompu. Ikhitshi elingenayo itepu ayinakukwazi ukusebenza kakuhle. Ndidinga ukufaka itephu yokugcwalisa imbiza eludongeni. Umgangatho ophezulu we-PTFE wokutywina iteyiphu kubaluleke kakhulu kulwenziwo lomsebenzi. Enkosi kumgangatho ophezulu we PTFE itywina elitywinwe ngumthengisi. Isixa sikhulu kakhulu kwaye sanele ukuba ndiyisebenzise amaxesha ama-2-3.
Le mpompo yokugcwalisa imbiza yenza ikhitshi lam lisebenze ngakumbi. Kwixesha elidlulileyo, bendisoloko ndifuna ukuphatha imbiza enzima yokufumana amanzi phantsi kwempompo okanye ukugalela amanzi embizeni nezinye izitya. Le yinto enzima kwaye iyadika. Xa ndandihlaziya ikhitshi lethu elitsha, ndaye ndacenga umyeni wam ukuba afake itampu. Umbhobho wokugcwalisa imbiza yePiper yenye yeenzame zethu kwaye sanelisekile yile faucet. Yenziwe ngobhedu ikakhulu, kwaye umphezulu ngumbala omnyama we-matte, ojongeka ujongeka kakhulu kwaye ubukeka. Emva kokuba ifakwe ekhitshini, iba yinkwenkwezi yekhitshi lethu. Ukusukela oko saqesha abatywini ukuba bafake, yonke into ihambe kakuhle, kwaye iwowow pot filler faucet ibisebenza ngokuqaqambileyo ukuza kuthi ga ngoku, ndiyayithanda!
Ibhokisi le mveliso ingene kuyo yayivumela ukuba ithunyelwe ngaphandle kwempawu zokuxubha ngentsimbi. Inxalenye efakwe eludongeni yayilula ngokwaneleyo ukuba iphakame njengoko sasijonge kulwakhiwo olutsha. Andikwazi ukuthetha ngokubeka eludongeni olukhoyo. Imveliso yeza kunye nesilungisi se-allen ukufaka i-coupler. I-woudl ibingakholeleki ukuba i-woudl ibandakanyiwe itheyiphu encinci ye-teflon kodwa nayiphi na ibhokisi yezixhobo esebenza ngemibhobho esele inayo. Incwadana yemigaqo kulula ukuyilandela. Jonga i-intanethi ukubona ukuba kukude kangakanani eludongeni ekufuneka ulufakile itepu njengoko ufuna ukuba ukwazi ukuzalisa iimbiza kodwa kwangaxeshanye ungabethi i-microwave yakho ngaphezulu koluhlu lwakho.
Kutshanje sifake i-pot filler, wonke umntu wayethandabuza kwaye eqikelela ukuba andizukuyisebenzisa kwaphela. Bayaphazama! Njengokuba usiba mdala le nto yokugcwalisa imbiza ikunceda ungahambisi imbiza enzima ngamanzi esitovini. Uninzi lwabapheki okanye nabani na opheka mihla le uya kuyithanda le nto kwaye uya kuyifumana iluncedo. Ndiyayithanda uyilo kunye nokuchukumisa. Inye kuphela inkxalabo endinayo kuxa isitovu sikhona kwaye ukugcwaliswa kwembiza kuphezu kobushushu, ngaba kungadala umonakalo? Ukuza kuthi ga ngoku kuba ndinezitshisi ezi-6 ndizama ukungasebenzisi isitshisi esilungile phezu kwembiza. Iyacetyiswa.
Intle, yenziwe kakuhle imbiza. Awubonanga umgangatho ophakamileyo wexabiso. Ukufakwa ngokuthe ngqo. Ngaba ngekhe wenze ngaphandle komntu kwakhona. Into yayipakishwe kakuhle kakhulu, kwaye akukho slackpy slack kule yunithi. Yomelele kwaye igudile. Ukugqiba kugqibelele.
Le mbiza yokugcwalisa yenziwe kakuhle kwaye yenza ukongezwa okumangalisayo kwikhitshi lam elitsha. Uplamba wam uyifakile ngokulula imbiza. Ibonakala izinzile kwaye kulula ukuyisebenzisa iya kubonelela iminyaka yovuyo kusapho lwam.
Ukufakwa ngokulula, kujongeka kulungile. Uziva uqinile kwaye ulawulo alugudisi. Inayo kuphela iveki. Ndiyayithanda ukuza kuthi ga ngoku.
Faka nje., Ijongeka intle